I-Porn kunye nezifo ezithathelwana ngesondo-iSiseko soMvuzo
Ikhaya Izilwanyana kunye nezifo ezithathelwana ngesondo
Izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, ekwabizwa ngokuba izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo (STD) kwaye izifo ze-venereal (VD), zizifo ezithi zisasazeke ngokulalana, ngakumbi ukuba neentlobano zesini kwilungu lobufazi, isini ezimpundu kunye nokwabelana ngesondo ngomlomo. Uninzi lwe-STIs ekuqaleni alubangeli zimpawu. Oku kukhokelela kumngcipheko omkhulu wokudlulisela esi sifo kwabanye.
I-Porn ineendima ezimbini ezahlukeneyo kwindlela esinokucinga ngayo ngobomi bethu bezesondo zinokuba neziphumo zempilo.
Okokuqala, ukuba ubukele iphonografi kunye nokuphulula amaphambili, kodwa ungabelani ngesondo naye nabani na, ukhuselekile ekubambeni nasiphi na isifo esosulela ngokwabelana ngesondo. Oku kuyinyani ngokupheleleyo, kodwa ayililo ibali elipheleleyo. Usesichengeni seengxaki zempilo ezifundwayo kunokuba ubanjwe sisifo. Ukuba uyindoda, ngokubukela iphonografi usazibhengeza kwiingxaki ezinokubakho ixesha elide kunye ne-erectile disys function (PIED) ye-porn (i-anorgasmia) okanye ukulibazisa ukubambezeleka. Ukuba ungumfazi ukubukela iphonografi kunokuba kukuqeqesha umzimba ukuba ukhethe iithoyi zesini okanye ukuphulula amalungu esini kunokuba usondele emzimbeni namaqabane okwenyani. Ababukeli be-porn abanobunzima baqeqesha ngokwasemzimbeni umdlalo ongalunganga.
Okwesibini, ngokubukela iphonografi, uqeqesha ngengqondo ukhetho lwakho lwesondo ukuze ufune ukuphinda into oyibonayo kwi-porn. Ezona ziqhelekileyo zijongwa kwi-porn yindawo engenazo iikhondom. Oku kuseka umnqweno engqondweni yakho ukungayihoyi ikhondom yokulalana okanye ezinye izithintelo zomzimba njengamadama amazinyo xa usabelana ngesondo ngomlomo.
Ukuziphatha ngokwesondo okukhuselekileyo njengokusebenzisa iikhondom, ukuba nenani elincinci lamaqabane ezesondo, kunye nokuba kubudlelwane apho umntu ngamnye elala kuphela nomnye kunciphisa umngcipheko. Ezona zibulala kakhulu zi-HIV ne-HPV. Nazi ezinye iinkcukacha ezisisiseko ngazo.
Intsholongwane kaGawulayo (i-HIV) ibangela Usulelo lweHIV kunye nexesha ifumene isifo sokungasebenzi kakuhle komzimba (UGawulayo). Intsholongwane kaGawulayo sesinye sezifo ezibulalayo emhlabeni, inamba yesi-2 kuluhlu lwezifo ezosulelayo nguMbutho wezeMpilo weHlabathi. Ngo-2014 yabulala malunga ne-1.4 yezigidi zabantu kwaye malunga ne-35 yezigidi abanye abantu babehlala nayo. E-USA malunga nezigidi eziyi-1.1 zabantu abanayo, kodwa malunga nesinye kwisibhozo abasazi, nto leyo ibenza ukuba babe semngciphekweni omkhulu wokudlulisela esi sifo.
I-Papilomavirus yabantu okanye i-HPV yintsholongwane encinci ye-DNA echaphazela ulusu kunye neendawo ezimanzi zomzimba njengomlomo, ubufazi, umlomo wesibeleko kunye ne-anus. Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-100 ezahlukeneyo ze-HPV. Ezona ntlobo zixhaphakileyo zifumaneka kulusu kwaye zibonakala njengeentsumpa ezibonwe esandleni. Ezinye iintlobo ze-HPV zisosulela nakwindawo zangasese zamadoda nabasetyhini. I-HPV yesini sesona sifo sixhaphakileyo esosulela ngokwabelana ngesondo e-US nakwihlabathi liphela. Ubuncinane zingama-40 iintlobo ze-HPV ezinokuchaphazela iindawo ezisesifubeni. Ezinye zezi "mngcipheko osezantsi" kwaye zibangela iintsumpa kumalungu angasese ngelixa iintlobo "zomngcipheko omkhulu" zinokubangela umhlaza wesibeleko okanye ezinye iintlobo zomhlaza wesini. Iindidi ezinobungozi obukhulu be-HPV zisenokubangela uhlobo lomhlaza womqala, obizwa ngokuba ngumhlaza we-oropharyngeal, oya usiba yinto exhaphake eMelika naseYurophu.
Iintsholongwane ze-HPV kudala zaziwa ukuba zibakhona kwindawo yesini kwaye zingunobangela obalulekileyo wesibeleko, i-vulvar, i-penile, kunye nomhlaza we-anogenital. Kukholelwa ukuba inani elonyukayo labantu ababandakanyeka kwizenzo zesondo kunye namaqabane amaninzi kwaye bazibandakanya kwizenzo zokwabelana ngesondo ngomlomo kwaye ngenxa yoko banesifo se-HPV kwingingqi yentloko nentamo, okukhokelela kwinqanaba eliphezulu lomhlaza we-oropharynx. Isingeniso esineenkcukacha ngakumbi kwi-HPV sinokufunyanwa Apha.
Zininzi ezinye ii-STIs ezingenakukwazi ukuba zizifo ezibulalayo, kodwa zisengozini kwimpilo yakho. Ayisoze ibe ngumbono olungileyo ukunika omnye umntu isifo!
Ukuba usabelana ngesondo, ukufumana iingcebiso okanye inkxaso kubasebenzi bezempilo yesondo kuhlala kububulumko.
KwiGlasgow sicebisa Sandyford, Ikwabonelela ngeenkonzo zeengcali zesini kunye namadoda angama-bi ngokusebenzisa Iprojekthi kaSteve Retson. E-Edinburgh abantu abaya Impilo yesondo yaseLothian.